I-Sun City Resort nezinto Onokuthi Uzenze
I-Sun City Resort eMzantsi Afrika
Indawo iSun City Resort inokuninzi onokuthi ukwenze okuzakuqinisekisa okokuba unexesha elimnandi kwiholide yakho.Ngaphandle kokukhwela iibhaluni ezibhabhela phezulu emoyeni emveni kwemini, nokubuka izilwanyana emini kunye nokoja inyama ehlathini, zikhona ezinye indlela zokuzonwabisa eSun City Resort onokuthi uthabathe inxaxheba kuzo. Ezi ziquka ukudubula iintolo, ukukhwela ibhayisekile ezinkulu, ukubetha amagubu, ukudubula udongo, imidlalo yase manzini kunye nokukhwela ibhaluni ebhabha emoyeni. Ukhuseleko lwendwendwe luhamba phambili kwaye zonke izixhobo zezodidi oluphezulu.Iindawo ezinomtsalane ezifumaneka eSun City nezenza umtsalane zongeziwe kongezwe indawo engaphandle yolonwabo ephakathi eLetsatsing Game Park imelene ngqo ne Sun City. Xa imane isakhiwa lendawo, kuzaku kongezwa iindawo zemidlalo. Qaphela okokuba ukhuseleko nezixhobo zezodidi oluphezulu kwaye kukhona okukhusela uluntu okufumanekayo xa ubani ethe wonzakala.
Ukukhwela Iibhayisekile Enkulu
Ulonwabo lokukhwela ibhayisekile enkulu kungathabatha iyure kwaye ukhatshwa uboniswe ngabaqeqesheke kakhulu. Abathabatha inxaxheba akudingeki bakwazi ukukhwela ibhayisekile buza iinkcukacha zokukhwela ziyafumaneka xa ubhatalela ukukhwela ezi bhayisekile.
Ukubula umdongo yinto epholisa ingqondo kakhulu, ithandwa ngancinci nabadala. Abayaleli bayalela abathabatha inxaxheba kwaye akukho sidingo sokuba bakwazi.
Iintola zalemihla ezenziwe ngezixhobo zalemihla ezifana nentola ezenziwa nge khompawundi kunye nentola ezixwesileyo ezinamandla zisetyenziswa kubugcisa bakudala bokudubula ngentola.
Imidlalo yase Manzini Noko Unokuthi Ukwenze Ukuzonwabisa
Indawo iSun City inemindlalo yase manzini eyonwabisayo equka ukukhwela imikhombe eyenziwe oku kwe banana, ukuhamba phezu kwamanzi, ukubhabhela phezulu kwamanzi ngebhaluni, ukukhwela inqanawe nangakumbi. Indawo iValley of the Waves inemityibilizi emnandi kunye nokukhwelwayo.
Kwabo bathanda ukukhwela amahashe eSun City, likhona ithuba lokuhamba uyokukhwela amahashe kwindawo encinci kulendawo ibucala ingumzi wezilwanyana, abakwaziyo nabo bangakwaziyo bamkelekile, bakhatshwa ngulowo usebenza ngamahashe.
Indawo ephezulu etyibilikisayo ebubude obungama 280 metres ukuya phezulu, 2km ubude kwaye ingabaleka kanga go 120km/h. Olu ke lulonwabo ongafuni likuphose. Faka isicelo sokubekelwa indawo kwindawo yokwamkela iindwendwe.
Uhambo loku Funda nge Nkcubeko
Ngexesha ukwi holide eSun City ungathabatha uhambo lokufunda ngenkcubeko. Okonwabisayo kuquka ukuphila imihla ngemihla kwindawo eyilali ngengoma, nomdaniso, ukubona umahluko kwilokhwe zesintu nokuva incasa yokutya okwahlukileyo kwesintu. Imisitho yemidaniso yesintu yasemveni kwemini iyafumaneka.
Izikuta Nokonyuka Intaba nge Bhayisekile
Onokuthi ukwenze eSun City kuquka ukonyuka intaba nge bhayisekile. Yonwabela imibono emihle kulendlela yonyukayo. Ziyafumaneka izikuta kwaye ibalulonwabo kusapho lonke.
Intenetya ne Squash
Akhona amabala okudlala intenetya akufuphi eCascades, apho iindwendwe zingathi zonwabele khona umdlalo we ntenetya okanye we squash kwindawo ekufuphi iGary Player Country Club.